Cabdirashiid Janan oo hadda tagay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo. – Kismaayo24 News Agency
by admin 4th February 2020 0199
Wasiirkii hore ee amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan) ayaa goor dhow gaaray magaalada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Diyaarad milatari oo ay leedahay dowladda Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay saaka ka soo qaaday magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi, oo uu ku sugnaa afartii cisho ee la soo dhaafay, isaga oo ka degtay garoon ku yaalla gudaha degmada Beled-Xaawo.
Ilo deegaanka ayaa sheegay in wasiir janan si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi, islamarkaana ay u soo banaan baxeen shacabka iyo maamulka maamulkaasi.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in goor dhow uu qaban doono shir jaraa’id, islamarkaana uu kaga warbixin doono xarigii loogu geystay magaalada Muqdisho.
Safarka uu Janan haatan ku tegay gobolka Gedo ayaa ku soo aadaya, iyadoo hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International Kenya ka dalbatay inay ku wareejiso dowladda dhexe, si loo horkeeno cadaaladda.
28-kii bishii hore ayaa taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed sheegay in wasiir Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsiga, kaas oo 31-kii August ee 2019-kii laga qabtay garoonka diyaaradaha ee M/ Muqdisho.
Cabdullaahi Wehliye oo taageeray Madaxwayne Qoor Qoor.
Xukuumadda Kheyre Oo Shir Muhiim Ah Ka Fureysa Magaalada Garoowe
Taliyihii Ciidamada Isku dhafka Galkacyo yo Saraakiil kale oo lagu qarax Qarax Ismiidaamin ah.
admin 28th April 2018 28th April 2018
Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug oo ka qayb galay Aska Wasiiro…